Somali News – Page 76 – Banaadir weyne
26/02/2019 Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in socdaalkii Afaraad uu ku tago dalka Qatar oo saaxiibo dhow la ah Madaxda Dowladda federaalka Soomaaliya,isla markaana uu la kulmo Amiirka dalka Qatar, Sheekh Tamim Bin Xamad Al Thani. Wararka aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in Madaxweyne Farmaajo uu casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka Qatar ...
Duqeyn Xoogan Oo Xalay Ka Dhacday Gobolka Sh/Hoose
26/02/2019 Afgooye (SMN) – Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn dhinaca cirka ah oo xalay laga fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Duqeynta oo socotay ku dhawaad 3 saacadood ayaa lagu garaacay deegaanada Sabiib, Caanoole, Bangale iyo Baladu-Amiin oo hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolkaasi. Deegaanada la duqeeyay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ...
26-02-2019 Muqdisho (SONNA) – Kullan-weynahan ay soo qabanqaabiyeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Seattle ee Gobalka Washington ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo dhaweynayay Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar oo maalmihii u dambeeyey booqasho ku joogay dalka Mareykanka. Waxgaradka, Haweenka, Aqoonyahanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo madasha ...
Dad Rayid Ahaa Oo Lagu Laayay Degaanka Lafoole
25/02/2019 Lafoole (SMN) – Wararka naga soo gaaraya Shabeelaha Hoose ayaa ku warramayaa in barqanimadii maanta dad rayid ahaa lagu dilay degaanka Lafoole ee gobolkaasi. Dadkan oo tiro ahaan ahaan gaarayay illaa 9 ruux oo isugu jiray lix Haween ah iyo saddex rag ah ayaa la sheegay in ay toogasho ku dileen rag hubeysan. Maxamed Ibraahim Barre guddoomiya ...
Amar ka soo baxay Madaxweyne Xaaf oo dhaqan galay
25-02-2019 Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Gelle Xaaf ayaa Maanta booqday waaxda dhul bixinta Xarunta Dawladda Hoose ee Magaalada Gaalkacyo. Amar kasoo baxay dhawaan Madaxweynaha Galmudug ayaa waxa Dawladda Hoose lagu faray in ay si dhaqso leh ku bilaabaan sharciyeenta dhulalka iyo dhismayaasha Magaalada Gaalkacyo oo aysan hada kadib jiri doonin cid meel aysan laheyn iska sheegata. ...
Madaxweyne Farmaajo oo shirar gaar gaar ah la yeeshay Madaxda dalalka Ciraaq, Sweden iyo Talyaaniga
25-02-2019 Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka qayb-galay Shir Madaxeedka Midowga Yurub iyo dalalka Jaamacadda Carabta oo maanta ka furmay magaalada Sharm El-Sheikh ee dalka Masar. Madaxweyne Farmaajo ayaa Shir-doceedyo la yeeshay Madaxweynaha dalka Ciraaq Mudane Barham Salih, Ra’iisul Wasaaraha dalka Sweden Mudane Stefan Löfven iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga Mudane Giuseppe Conte. Madaxweynaha iyo dhiggiisa dalka ...
25/02/2019 Muqdisho (SONNA) – Dable Xoogga Dalka Cabduqaadir Maxamuud Cali ayaa loo heystaa dilka Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud, dilkaasi oo ka dhacay degmada Mahadeey ee Gobalka Shabeelada Dhexe 26-11-2018. Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud ayaa aha wada gaari oo ku safrayay qeyba kamid ah gobalka Shabeelada dhexe, waxa uu caan ka ahaa deeganada gobalkaasi, marxuumka ayaa istaagsanaa halka loogu ...
25-02-2019 Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa niyadsami ka muujiyey kulanka dhexmari doono isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong Un. Madaxweyne Donald Trump oo sida caadadiisa ah bartiisa Twitter-ka ku soo gubiyey arrintan, ayaa qorey; labadeenuba waxaan fileynaa in aan sii wadno horumarkii la gaarey. Madaxweyne Donald Trump ayaa ka dib kulanki koowaad ee ay yeeshaan isaga iyo ...
Banaanbax Ballaaran Oo Ka Dhacay M/ Baladweyne
24/02/2019 Baladweyne (SMN) – Dibadbaxan oo ahaa mid ballaaran ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Banaanbaxa ayaa looga soo horjeeday boob iyo masuq-maasuq lagu sameeyay raashin gargaar oo loogu talagalay dadka danta yare ee ku dhaqan magaaladaasi. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa dalbaday in wax laga qabto dhibaatooyinkaasi.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Xoogga dalka oo loo furay tababar la xiriira xeerka Anshaxa
24-02-2019 Tababarkan aqoon kororsiga ah ayaa la xiriira xeerka Anshaxa ee Ciidanka Xoogga Dalka, waxaana loo furay saraakiil katirsan Ciidanka Xoogga iyo Agaasime waaxeedyada Wasaaradda Gaashaan-dhigga Xukuumadda Soomaaliya. Maalmaha uu socdo tababarka ayaa dhinacyada ka qeyb galaya waxa ay baran doonaan xeerkan iyo habka ugu wanaagsan ee loo dhaqan gelin karo, si xeerkan uu u noqdo mid shaqeeya. ...